Kiisaska Corona ee Denmark oo gaaray Halkii ugu Sareesay
HomeWararka DenmarkKiisaska Corona ee Denmark oo gaaray Halkii ugu Sareesay
December 28, 2021 Wararka Denmark, Wararka Maanta 0
Photo Fredrik Sandberg / TT
Danmark waxay dhigtay rikoor cusub oo ah infekshannada “Covid-19” tan iyo bilowgii masiibada, iyadoo ku dhawaaqday 16,164 xaaladood oo cusub oo fayraska 24-kii saac ee la soo dhaafay.
Tirada waxaa ku dhawaaqay maamulka caafimaadka Denmark maanta oo Isniin ah, ayaa la jabiyay rikoorkii maalinlaha ahaa ee hore, kaasoo shalay laga diiwaan geliyay 14,844 cudurro cusub laga helay.
Maamulka caafimaadka ayaa sheegay in 7 qof ay dhinteen 24-kii saac ee la soo dhaafay ka dib markii uu ku dhacay cudurka “Covid-19”.
Tirada caabuqa coronavirus-ka ee Danmark ayaa aad kor ugu kacday horraantii Disembar, laakiin usbuucii hore waxay u muuqatay in xawliga caabuqu uu xasilay, laakiin saraakiisha caafimaadka ee waddanku waxay sheegeen dhawrkii maalmood ee la soo dhaafay in tirada caabuqyadu ay aad kor ugu kacday.
Waxaa xusid mudan in Wasiirka Caafimaadka, Magnus Heunik, uu todobaadkii hore ku sheegay bartiisa Twitter-ka in tirada dadka uu ku dhacay cudurka ‘Omicron’ uu ku sii badanayo dalka.